Egwurugwu Gamma: gini ka ha bụ, njirimara, ojiji na ihe egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Na ihe omumu nke physics nuklia, a na-amu ihe di iche iche nke radieshon di. N'okwu a, anyị ga-elekwasị anya n'ịmụ ihe ụzarị gamma. Ọ bụ radieshon electromagnetic nke na-emepụta site na nrụrụ redio nke nuklia nuklia. Egwuregwu gamma ndị a nwere ụzarị ikuku kachasị elu ma dị n'etiti ndị kasị dị ize ndụ nye ụmụ mmadụ yana radieshon ionizing ndị ọzọ.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe bụ njirimara, mkpa na ojiji nke ụzarị gamma.
2 Njirimara Gamma
3 Akụrụngwa mere ekele ụzarị gamma
Na nchịkọta, anyị ga-edepụta njirimara ndị bụ isi nke ụzarị gamma:
Ha bụ ụmụ irighiri ihe na-enweghị izu ike ebe ọ bụ na ha na-agagharị na ọsọ nke ọkụ.
Ha enweghịkwa ụgwọ eletriki ebe ọ bụ na ọkụ eletrik na magnet anaghị achịkwa ha.
Ha nwere obere ikike ionizing ọ bụ ezie na ha na-abanye n'ime. Egwurugwu Gamma nke radon ha nwere ike ịgafe ihe ruru 15 cm nchara.
Ha bụ ebili mmiri dịka ọkụ mana ha siri ike karịa ụzarị ọkụ ọkụ.
Ngwunye redio na-etinye na gland ma zere radieshon gamma na-eme ka o kwe omume ịmụ gland site n'inweta ya n'ụsọ osimiri.
Ha nwere oke radieshon dị elu ma bụrụ otu n'ime radieshon kachasị dị egwu maka ụmụ mmadụ, dịka radieshon ionizing niile. Ihe ize ndụ dị na ya bụ na ha bụ ebili mmiri dị elu nke nwere ike ibibi ụmụ irighiri akwara. ndị mejupụtara mkpụrụ ndụ, na-akpata mkpụrụ ndụ ihe nketa na ọbụna ọnwụ. N'ụwa, anyị nwere ike ịhụ ihe ndị sitere n'okike nke ụzarị gamma na ire ere nke radionuclides na mmekọrịta nke ụzarị na mbara igwe; ụzarị ọkụ ole na ole na-ewepụtakwa ụdị radieshon a.
Dị ka ọ dị, ugboro ole radieshon a karịrị 1020 Hz, n'ihi ya, ọ nwere ume karịrị 100 keV na ogologo ntụgharị nke na-erughị 3 × 10 -13 m, nke dị obere karịa dayameta nke atọm. A na-amụkwa mmekọrịta metụtara igwe gamma nke ike sitere na TeV na PeV.
Egwuregwu Gamma na-abanyekwu karịa radieshon nke ụdị nrụrụ redio ndị ọzọ mepụtara, ma ọ bụ mmebi alpha na beta ire ere, n'ihi obere mmetụta nke ịmekọrịta ihe. Gamma radieshon mebere foto. Nke a bụ nnukwu ihe dị iche na redio alpha nke mejupụtara helium nuclei na beta radieshon nke mejupụtara electrons.
Igwe, na-anaghị enye ha uka, ha na-erughị ionizing. N'ebe ndị a, nkọwapụta ihe ịtụnanya nke mmekọrịta dị n'etiti ngalaba electromagnetic na ihe enweghị ike ileghara usoro dị iche iche kwantum anya anya. Egwuregwu Gamma dị iche na ụzarị ọkụ sitere na mmalite ha. A na-emepụta ha site na ntụgharị nuklia ma ọ bụ nke subatomic, n'agbanyeghị nke ọ bụla, ebe a na-emepụta ụzarị ọkụ site na ntụgharị ntụgharị ike site na elektrọn ndị sitere na ike quantized nke mpụga na-abanye n'ọtụtụ ogo ike dị n'ime.
Ebe ọ bụ na ụfọdụ ntụgharị eletrik nwere ike karịa ike nke ụfọdụ mgbanwe nuklia, ugboro ole ọkụ ọkụ nwere ike ịdị elu karịa ụzarị ọkụ ọkụ gamma. Mana, n’eziokwu, ha niile bụ ebili mmiri electromagnetic, dịka ebili mmiri redio na ọkụ.
Akụrụngwa mere ekele ụzarị gamma
Ihe achọrọ iji chebe ụzarị gamma karịrị nke ahụ chọrọ iji kpuchido mkpụrụ alpha na beta. Enwere ike igbochi ihe ndị a na mpempe akwụkwọ dị mfe (α) ma ọ bụ mpempe igwe dị nro (β). Akụrụngwa nwere ọnụọgụ atọm dị elu na njupụta dị elu nwere ike ịmasị ụzarị gamma nke ọma. N'ezie, ọ bụrụ na achọrọ 1 cm nke ndu iji belata ike nke ụzarị gamma site na 50%, otu mmetụta a na - eme na 6 cm simenti na 9 cm nke ụwa emetụtara.
A na-atụle ihe ndị na-echebe ihe na ọkpụrụkpụ dị mkpa iji belata ike ọkụ radies na ọkara. N’ụzọ doro anya, ka elu nke ike foto ahụ, ka oke ọkpụrụkpụ nke ọta achọrọ.
Yabụ, ọ dị mkpa ihu na ihu iji chebe mmadụ, n'ihi na ụzarị ọkụ na ụzarị ọkụ ọkụ nwere ike ịkpata ọkụ, kansa, na mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ọmụmaatụ, na osisi ike nuklia, a na-eji ya echebe igwe na ciment na njigide nke pellets, mgbe mmiri nwere ike igbochi radieshon n'oge mmanụ mkpanaka nchekwa ma ọ bụ chernobyl isi njem.
Ionizing radieshon ọgwụgwọ bụ usoro anụ ahụ eji mepụta ọgbụgba ihe ọgwụgwọ na ịdị ọcha, mmetọ nri, akụrụngwa na ngwaahịa ụlọ ọrụ, yana itinye ha n'ọrụ na mpaghara ndị ọzọ, Anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị.
Usoro a gụnyere ikpughere ngwugwu ikpeazụ ma ọ bụ ngwaahịa buru ibu ma ọ bụ ihe dị ike iji nweta ike. A na-eme nke a n'ime ụlọ pụrụ iche a na-akpọ ụlọ irradiation maka ọnọdụ ọ bụla akọwapụtara yana n'ime oge ụfọdụ. Ebili mmiri ndị a na-abanye na ngwaahịa ndị ekpughere, gụnyere ngwaahịa ndị nwere ngwaahịa multilayer.
Iji Cobalt 60 eme ihe maka ịgwọ ọrịa etuto bụ usoro gbasasiri ike ugbu a na mba m yana ụwa n'ihi nrụpụta ọrụ ya yana nchekwa zuru oke. A na-akpọ ya ọgwụgwọ cobalt ma ọ bụ ọgwụgwọ cobalt na gụnyere ikpughe ụrọ akpụ na ụzarị gamma.
Maka nke a, a na-eji ihe eji eme ihe a na-akpọ cobalt ọgwụgwọ, nke nwere isi mkpuchi nwere cobalt 60, ma kwadebere ya na ngwaọrụ nke na-ejikwa njikwa nke ọma na ikpughe ihe achọrọ n'ọnọdụ ọ bụla iji gwọọ ọrịa ahụ nke ọma.
Ngwa ahia mbu nke ike ionization malitere na mbu 1960. Taa, enwere ihe dị ka osisi irradiation 160 na-arụ ọrụ n'ụwa, kesara ihe karịrị mba 30, na-enye ọtụtụ ọrụ maka ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, n'agbanyeghị na ha dị ize ndụ, mmadụ na-achịkwa iji ojiji nke gamma n'ọtụtụ ebe dị ka ọgwụ na-emetụta. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ụzarị gamma na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Egwuregwu Gamma